यस्तो छ "दिन दुईगुना रात चौगुना "भाइरल भइरहेको तस्वीरको वास्तविकता ! — KhabarTweet
यस्तो छ “दिन दुईगुना रात चौगुना “भाइरल भइरहेको तस्वीरको वास्तविकता !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ०६, २०७७ समय: ७:०१:४०
काठमाडौं- सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा पुरुष र महिलाले यात्रा गरिरहेको एउटा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा दिन दुईगुना रात चौगुना भाइरल भइरहेको छ । मोटरसाइकलको पछाडि बसेकी महिलाले लगाएको पोशाकलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिएका छन् ।
भाईरल तस्वीरको प्रदेश–३–०२–००१ ब–१४१२ नम्बरको उक्त मोटरसाइकल धादिङस्थित गल्छी गाउँपालिकाको भएको खुलेको छ। मोटरसाइकलमा सवार पुरुष र महिला सोही गाउँपालिकामा कार्यरत इञ्जिनियर र सव इन्जिनियर हुन् । केही महिनाअघि मात्रै जागिर सुरु गरेका उनीहरु प्रशासनिक कामले काठमाडौं आएका बखत मोटरसाइकलमा सँगै हिँडेका थिए ।
पूर्वसचिव उपाध्यायले आफूलाई एकजना साथीबाट इनबक्समा सो तस्वीर प्राप्त भएको बताएकाछन् । ‘मलाई चिनेको साथीले फोटो पठाउनुभयो । सरकारी मोटरसाइकलमा त्यस्तो लुगा लगाएर हिँडेको देख्दा अलि अनौठो लागेर पोष्ट गरेको थिएँ । एकैछिनमा भाइरल भयो,’ उनले भने ।
केहीबेरमा उपाध्यायलाई सम्वन्धित व्यक्तिले फोन गरेर तस्वीर हटाउन आग्रह गरेपछि उनले हटाए । ‘सुरुमा मलाई सरकारी कर्मचारीले गर्लफ्रेन्ड लिएर हिँडेको होला भन्ने अनुमान थियो । तर, दुवैजना सरकारी कर्मचारी नै भएको थाहा भएपछि मैले केहीबेरमै त्यो तस्वीर हटाएको हो । तर, धेरैले मेरो फेसबुकको स्क्रिनसट गर्न भ्याइसकेछन्,’ उपाध्यायले हाँस्दै भने ।
आइतबार काममा फर्कने गरी काठमाडौं आएकी उनी यही तनावले गर्दा अहिले पनि काठमाडौंमै छिन् । गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले उनीहरु दुवै बैरनीबाट काठमाडौं सँगै आएको बताए । ‘मैले बुझ्दा उनीहरु बैरेनीबाट एकसाथ काठमाडौं आएका हुन् । लकडाउनमा पनि दिनरात खटिएर उनीहरुले ३० गते आफ्नो काम सबै सिध्याएका थिए । त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग विदा मागेर आइतबार फर्किने गरी विदामा आएका हुन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
तर, ती महिलाले गरेको एउटा कमजोरीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि धेरै आक्रमण गर्दा तनाव बढ्न सक्ने कुरामा शर्माको स्वीकारोक्ति छ । यस्तो विषयमा सम्वेदनशीलता अपनाउन शर्माले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा अहिले उनीमाथि धेरै नै एट्याक भएको छ, कम्तिमा फोटो खिच्नु अगाडि एकचोटि उनीसँग सहमतिचाहिँ लिनुपर्थ्यो । तर, पनि पब्लिक व्यक्तिले ड्रेसअपमा चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ अनलाईनखवरवाट